Anandamide VS CBD: Keebaa U Fiican Caafimaadkaaga?
Bogga ugu weyn > Anandamide VS CBD: Keebaa U Fiican Caafimaadkaaga? Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Iyaga!
Anandamide VS CBD: Keebaa U Fiican Caafimaadkaaga? Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Iyaga!
Waa maxay Anandamide (AEA)
Anandamide (AEA), sidoo kale loo yaqaan molecule bliss, ama N-arachidonoylethanolamine (AEA), waa neurotransmitter gudbiyaha aashitada dufanka leh. Magaca Anadamida (AEA) waxaa laga soo qaatay Sanskrit of Joy “Ananda.” Raphael Mechoulam ayaa ereyga abuuray. Sidee, oo ay weheliyaan labadiisa caawiye, WA Devane iyo Lumír Hanuš, waxay markii ugu horaysay heleen "Anandamide" sanadkii 1992. Anandamide (AEA) waxay wax weyn ka qabanaysaa dhibaatooyinkeena jireed iyo maskaxeed.
Waa maxay Cannabidiol (CBD)?
Cannabidiol (CBD) waa xeryahooda labaad ee ugu firfircoon ee loo yaqaan 'cannabinoids' ee laga helo xashiishadda sativa (marijuana ama hemp). Tetrahydrocannabinol (THC) waa tan ugu baahsan sidoo kale tan ugu cilmi nafsiga badan ee laga helo geedka xashiishka. THC waxay la xiriirtaa helitaanka dareen "sare".
Si kastaba ha noqotee, CBD maahan mid maskaxeed oo waxaa laga soo qaatay dhirta hemp oo ay ku jiraan qadar yar oo THC ah. Hantidan ayaa ka dhigtay CBD inay caan ka noqoto qaybta caafimaadka iyo fayoqabka.
Saliida Cannabidiol (CBD) dhinaca kale waxaa laga soo qaatay dhirta xashiishka iyadoo lagu darayo CBD-da laga soo saaray saliida sideha sida saliidda abuurka hemp ama saliidda qumbaha.
Anandamide & Cannabidiol FAQ
Waa maxay Anandamide?
Anandamide, oo sidoo kale loo yaqaan N-arachidonoylethanolamine, waa neurotransmitter-ka dufanka leh ee laga helo dheef-shiid kiimikaadka aan oksida lahayn ee eicosatetraenoic acid, waa lagama maarmaan omega-6 fatty acid. Magaca waxaa laga soo qaatay erayga Sanskrit ee ananda, oo macnaheedu yahay "farxad, raynrayn, raynrayn", iyo amide.
Anandamide ma yahay hormoon?
Cilmi-baaristu waxay bixisaa xiriirka ugu horreeya ee u dhexeeya oxytocin - oo loogu magac daray "hoormoonka jacaylka" - iyo anandamide, oo loogu yeero "molecule bliss" oo loogu talagalay doorka ay ku leedahay firfircoonida Cannabinoid qabtayaasha unugyada maskaxda si kor loogu qaado dhiirrigelinta iyo farxadda.
Daawada anandamide ma mid kacsan baa mise waa mid xaddidan?
Gabagabadii, Cannabinoid reseptors-ka nooca CB1 iyo sidoo kale ligand endogeneous ligand, anandamide, waxay ku lug leeyihiin xakamaynta kacsanaanta neerfaha, sidaas awgeed waxay yareyneysaa neurotransmission-ka xasaasiga ah ee goobta presynaptic, farsamo laga yaabo inay ku lug yeelato ka hortagga kacsanaanta xad dhaafka ah ee horseedaysa .
Maxay yihiin labada ugu badan ee la baadho endocannabinoids ee jidhku si dabiici ah u soo saaro?
Cilmi-baadhayaashu waxay qiyaasayaan inay jiri karto soo-kabashada saddexaad ee cannabinoid sugaya in la ogaado. Endocannabinoids waa walxaha jidhkeenu si dabiici ah u sameeyo si uu u kiciyo qaboojiyayaashan. Labada ugu fiican ee sifiican loo fahmay molikuyuulladaan waxaa lagu magacaabaa anandamide iyo 2-arachidonoylglycerol (2-AG).
Jirka bani’aadamku ma leeyahay nidaam cannabinoid ah?
Nidaamka loo yaqaan 'cannabinoid endogenous-oo loogu magac daray geedka horseeday helitaankiisa-waa mid ka mid ah nidaamyada jir ahaaneed ee ugu muhiimsan ee ku lug leh dejinta iyo ilaalinta caafimaadka aadanaha. Endocannabinoids iyo soo dhaweeyaashooda waxaa laga helaa jirka oo dhan: maskaxda, xubnaha, unugyada isku xira, qanjidhada, iyo unugyada difaaca jirka.
Muxuu ahaa kii ugu horreeyay ee cannabinoid la helo?
Sannadkii 1992, shaybaarka Mechoulam ayaa go'doomiyay endocannabinoid-kii ugu horreeyay: molecule oo aakhirkii lagu tilmaamay inuu yahay agonist qayb ka mid ah CB1. Waxaa loo aqoonsaday arachidonoyl ethanolamide waxaana loo bixiyay anandamide.
Ma anandamide waa shukulaato?
THC, si kastaba ha noqotee, lagama helo shukulaatada. Taabadalkeed, kiimiko kale, neurotransmitter loo yaqaan anandamide, ayaa lagu go'doomiyay shukulaatada. Si xiiso leh, anandamide sidoo kale waxaa si dabiici ah loogu soo saaraa maskaxda.
Shukulaatada ma cannabinoidbaa?
Anandamide waxaa loogu yeeraa endocannabinoid maxaa yeelay waxaa sameeya jirkeena waxayna moodaa cannabinoids laga helo geedka marijuana. Marka, qayb ka mid ah shukulaatada iyo qayb ka mid ah dhirta marijuana labadaba waxay awood u leeyihiin inay dhiirrigeliyaan nidaamka neerfaha gudbiya ee marijuana.
Shukulaatada miyuu leeyahay theobromine?
Theobromine waa alkaloid aasaasiga ah ee laga helo kookaha iyo shukulaatada. Budada Cocoa way ku kala duwanaan kartaa qadarka theobromine, laga bilaabo 2% theobromine, ilaa heerar sare oo ku dhow 10%. Usually Caadi ahaan waxaa jira xoog saaris ka sarreeya mugdiga marka loo eego shukulaatada caanaha ku jirta.
Maxay yihiin kuwa ugu caansan cannabinoids?
Labada ugu weyn ee cannabinoids waa delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) iyo cannabidiol (CBD). Waxa ugu caansan ee labadan la yaqaan waa delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), oo ah kiimikada masuulka ka ah saamaynta nafsaaniga ah ee xashiishka.
Waa maxay molecule bliss?
Anandamide waa kiimiko maskaxda lagu yaqaan oo loo yaqaan "bliss molecule" doorka ay ka ciyaareyso soo saarida dareenka farxada. … Waxay ku shaqeysaa iyada oo ku xidhan isla soo dhaweyaasha maskaxda sida xarunta ugu weyn ee cilmu-nafsiga ee marijuana.
Ma anandamide ma daawo?
Anandamide, ligand endogenous for brain cannabinoid CB1 receptors, waxay soo saartaa saameyn dhaqameedyo badan oo la mid ah kuwa Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), maaddada ugu weyn ee nafsaani-nafsiga ah ee marijuana.
Jirka aadanaha ma soo saaraa cannabinoids?
Endocannabinoids. Endocannabinoids, oo sidoo kale loo yaqaan 'cannabinoids endogenous', waa molecules uu sameeyo jirkaaga. Waxay la mid yihiin cannabinoids, laakiin waxay soo saaraan jirkaaga.
CBD miyuu kordhiyaa dopamine?
CBD waxay sidoo kale kicisaa soo-qaadaha adenosine si loogu dhiirrigeliyo sii deynta glutamate iyo dopamine neurotransmitters. Iyada oo loo marayo isdhexgalka ay la leedahay dhakhaatiirta 'dopamine receptors', waxay ka caawineysaa kor u qaadista heerarka dopamine iyo nidaaminta garashada, dhiirigelinta, iyo dabeecadaha abaal-marinta raadinta.
Indica ma kordhinaysaa dawada 'dopamine'?
wuxuu yareeyaa xanuunka daran. waxay kordhisaa rabitaanka cuntada. waxay kordhisaa dawada loo yaqaan 'dopamine' (neurotransmitter oo ka caawisa xakamaynta abaalmarinta maskaxda iyo xarumaha raaxada) waqtiga isticmaalka habeenkii.
Daroogo noocee ah ayaa shukulaatada?
Sonkorta ka sokow, shukulaatada sidoo kale waxay leedahay laba daroogo oo kale oo neerfayaasha, kafeyn iyo theobromine. Shukulaatada kaliya maahan inay kiciso soo-dhoweynta opiate ee maskaxdeena, waxay sidoo kale keentaa in lagu sii daayo neerfaha kiimikada xarumaha raaxada maskaxda.
Muxuu jirka ku sameeyaa anandamide?
Jidhkeenu wuxuu abuuraa anandamide oo la dalbado, si loo isticmaalo marka loo baahdo in lagu ilaaliyo homeostasis. Anandamide wuxuu tan ku sameeyaa isagoo gacan ka geysanaya hagaajinta bararka iyo calaamadaha neerfaha. Sidii loo abuuray, waxay ugu horrayn ku xidhan tahay soo dhoweeyaasheena cannabinoid CB1 iyo CB2 sida cannabinoids-ka sida THC ay u baahan tahay marka la cuno.
Waa maxay nidaamka Cannabinoid qabtaha?
Daaweeyeyaasha Cannabinoid, oo ku yaal jirka oo dhan, waa qayb ka mid ah nidaamka endocannabinoid, kaas oo ku lug leh habab kala duwan oo jir ahaaneed oo ay ka mid yihiin rabitaanka cuntada, dareemidda xanuunka, niyadda, iyo xusuusta. Daaweeyeyaasha Cannabinoid waxay ka mid yihiin nooc ka mid ah qabtayaasha xuubka unugga ee ku jira G borotiinka isku dhafan ee qaabilaadda superfamily.
Maxay yihiin kooxaha waxqabadka kala duwan ee ku jira anandamide?
Kooxaha waxqabadka Anandamide waxaa ka mid ah amides, esters, iyo ether oo silsilado dhaadheer oo polyunsaturated acids ah, oo qaab dhismeed ahaan ula wadaaga farmashiyeyaasha muhiimka ah D-9-tetrahydrocannabinol (THC).
Sideed u kordhineysaa heerarka anandamide si dabiici ah?
Cun cunno qani ku ah mirahaan isla markaana jooji wax soo saarkaaga FAAH oo kordhiya heerarkaaga anandamide! Shukulaatada waa cunto kale oo kaa caawin karta kobcinta anandamide. Waxay ka kooban tahay dhismo loo yaqaan 'ethylenediamine' oo joojiya soosaarka FAAH. Maskaxda ku hay seddexdan cunno marka xigta ee aad aadeyso dukaamada waaweyn.
Shukulaatada ma ku jirtaa anandamide?
Shukulaatada ma daroogobaa?
Shukulaatada waxay leedahay qaddar sonkor ah. Sonkorta ka sokow, shukulaatada sidoo kale waxay leedahay laba daroogo oo kale oo neerfayaasha, kafeyn iyo theobromine. Shukulaatada kaliya maahan inay kiciso soo-dhoweynta opiate ee maskaxdeena, waxay sidoo kale keentaa in lagu sii daayo neerfaha kiimikada xarumaha raaxada maskaxda.
Waa maxay daroogada ku jirta shukulaatada?
Theobromine waa alkaloid aasaasiga ah ee laga helo kookaha iyo shukulaatada.
Kiimikadee ayaa kujira shukulaatada?
Theobromine, oo horey loogu yaqaanay xantheose, waa alkaloid qadhaadh oo ka kooban warshadda cacao, oo leh qaaciddada kiimikada ee C7H8N4O2. Waxaa laga helaa shukulaatada, iyo sidoo kale dhowr raashin oo kale, oo ay ku jiraan caleenta geedka shaaha, iyo lowska kola.
Shukulaatada miyey kordhisaa serotonin?
Si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay shukulaatada waxay ka kooban tahay tryptophan, natiijada ka soo baxda serotonin ayaa kaa caawin karta sharraxaadda sababta uu qofku u dareemi karo farxad, degganaan, ama walaac yar ka dib cunista qayb ka mid ah keega shukulaatada (Serotonin).
Maxay mas'uul ka tahay anandamide?
Anandamide wuxuu door ka ciyaaraa nidaaminta habdhaqanka quudinta, iyo jiilka neerfaha ee dhiirigelinta iyo raaxeysiga. Anandamide ayaa si toos ah loogu duray maskaxda qaab dhismeedka maskaxda ee laxiriira abaalmarinta maskaxda nukleus waxay xoojineysaa jawaabaha lagu farxo ee jiirka si loogu abaalmariyo dhadhanka sukrose, iyo sidoo kale waxay xoojisaa qaadashada cuntada sidoo kale.
CBD ma antioxidant baa?
THC iyo CBD waa antioxidants awood badan-oo ka awood badan fitamiin C iyo E. Xaqiiqdii, Patent-ka Dowlada Mareykanka 1999/008769 waxaa si gaar ah loogu talagalay astaamaha neuroprotectant iyo antioxidant ee cannabinoids.
Muxuu sameeyaa enzyme-ka FAAH?
Fatty acid amide hydrolase (FAAH) waa mammalian nuxur xuub enzyme ah oo hoos u dhigta qoyska fide acid amide ee lipid signaling endogenous, oo ay ku jiraan endogenous cannabinoid anandamide iyo walaxda hurdada dhalisa oleamide.
Sidee CBD saameyn ugu yeeshaa anandamide?
Daraasadaha cilmiga kiimikada ayaa tilmaamaya in cannabidiol ay kor u qaadi karto calaamadaha anandamide endogenous si dadban, iyadoo la joojinayo nabaad-guurka jirka ku dhaca ee anandamide oo ay soo saartay enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH).
Waa maxay macnaha cannabinoid?
Ereyga Cannabinoid wuxuu loola jeedaa walax kiimiko kasta, iyadoon loo eegin qaab dhismeedka ama asalka, ee ku biiraya soo qabtayaasha cannabinoid ee jirka iyo maskaxda waxayna leeyihiin saameyn la mid ah kuwa ay soo saarto dhirta Cannabis Sativa. Cannab Labada ugu muhiimsan ee cannabinoids waa Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) iyo cannabidiol (CBD).
Waa maxay nidaamka endocannabinoid maxaase qabtaa?
Jirka bini'aadamka wuxuu ka kooban yahay nidaam gaar ah oo loo yaqaan endocannabinoid system (ECS), kaas oo ku lug leh nidaaminta shaqooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin hurdo, cunto xumo, xanuun iyo jawaab celinta habka difaaca jirka.
Jidhku ma leeyahay qabtayaal cannabinoid ah?
Daaweeyeyaasha Cannabinoid, oo ku yaal jirka oo dhan, waa qayb ka mid ah nidaamka endocannabinoid, kaas oo ku lug leh habab kala duwan oo jir ahaaneed oo ay ka mid yihiin rabitaanka cuntada, dareemidda xanuunka, niyadda, iyo xusuusta. … 2007, kuxirnaashaha dhowr cannabinoids oo kujira G protein-kujira receptor GPR55 ee maskaxda ayaa lagu sharaxay.
CBD miyuu kordhiyaa anandamide?
Marka la eego saameynta daawada Cannabinoid-ku-tiirsan ee CBD ee ku saabsan xeerarka cabsida ee la bartay ee kor lagu sharaxay, CBD waxay kordhisaa heerarka anandamide iyadoo la joojinayo dib-u-soo-celinta gawaadhida-dhexdhexaadinta iyo hoos u dhigista FAAH.
Waa kuwee cannabinoid loo isticmaalo walaaca?
Qiyaasta hoose ee THC iyo qiyaas dhexdhexaad ah oo CBD ah, Harlequin's Cannabinoid wuxuu ku habboon yahay dagaalyahannada walaaca ee aan ka fikireynin dabacsanaan dabacsan. Terpene-keeda ugu badan waa myrcene, oo la rumeysan yahay inuu leeyahay saameyn nasasho waxaana loo isticmaali jiray taariikhda oo dhan gargaar hurdo.
CBD ma caawisaa walaaca?
CBD waxaa badanaa loo isticmaalaa in wax looga qabto walwalka, iyo bukaanka ku dhibaateysan dhibaatada hurdo la’aanta, daraasadaha ayaa soo jeedinaya in CBD ay ka caawin karto labada hurdo iyo seexashada labadaba. CBD waxay bixin kartaa ikhtiyaar loogu talagalay daaweynta noocyada kala duwan ee xanuunka daba dheeraada.
Aalkoladu ma caawisaa walaaca?
Khamrigu waa suuxdin iyo niyad jab saameeya nidaamka neerfaha ee neerfaha. Marka ugu horeysa, cabitaanku wuxuu yareyn karaa cabsida wuxuuna maskaxdaada ka saari karaa dhibaatooyinkaaga. Waxay kaa caawin kartaa inaad dareento xishood yar, waxay ku siinaysaa dhiirrigelin niyadda ah, waxayna kaa dhigeysaa inaad guud ahaan dabacsan tahay.
Sideen ku ogaan karaa walaaca?
Si loo ogaado cudurka walwalka, dhaqtarku wuxuu sameeyaa baaritaan jireed, wuxuu weydiinayaa astaamahaaga, wuxuuna kugula talinayaa baaritaanka dhiigga, oo ka caawiya dhaqtarka inuu ogaado haddii xaalad kale, sida hypothyroidism, ay sababi karto astaamahaaga. Dhakhtarku wuxuu kaloo waydiin karaa wixii daawooyin ah ee aad qaadanaysid.
Waa maxay daawooyinka aan la qaadan karin CBD?
Dawooyinka lidka ku ah diiqadda (sida fluoxetine, ama Prozac)
Daawooyinka sababi kara lulmooska (antipsychotics, benzodiazepines)
Antibiyootikada loo yaqaan 'Macrolide antibiotics' (erythromycin, clarithromycin)
Daawooyinka wadnaha (qaar ka mid ah xannibaadaha kanaalka kalsiyum)
CBD miyuu sii daayaa dopamine?
Waa maxay nooca hooseeya ee loo yaqaan 'dopamine'?
Calaamadaha iyo astaamaha qaar ee xaaladaha la xariira yaraanta dopamine waxaa ka mid ah: murqaha oo la isku qabsado, murgacasho, ama gariir. xanuun iyo xanuun. adkaanshaha muruqyada.
Kafiinku miyuu kordhiyaa heerarka dopamine?
Caffeine, waa walaxda ugu badan ee la cuno nafsaaniga ah ee adduunka, waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiirrigeliyo soo jeedka iyo in la xoojiyo feejignaanta. Sida daawooyinka kale ee kicinta kiciya (kiciyayaasha iyo modafinil), kafeynku wuxuu kobciyaa calaamadaha dopamine (DA) ee maskaxda, taas oo inta badan ay ku kacdo adonosine A2A reseptors (A2AR).
Waa maxay habka ugu dhakhsaha badan ee loo kordhiyo dopamine?
Cun borotiin badan
Cun Dufanka Dufan ee Yar
Isticmaal daawooyinka loo yaqaan 'Probiotics'
Cun digirta Velvet
Jir-dhiska Inta badan
Hel qorrax ku filan qorraxdu
CBD miyuu kiciyaa serotonin?
CBD daruuri kama aha kor u qaadista heerarka serotonin, laakiin waxay saameyn ku yeelan kartaa sida soo-qabtayaasha kiimikada maskaxdaadu ay uga jawaabaan serotonin horey ugu jiray nidaamkaaga. Daraasad xayawaan ah 2014 ayaa lagu ogaaday in saameynta CBD ee kuwan soo dhaweeyeyaasha maskaxda ay soo saartay labadaba antidepressant iyo anti-walaaca.
CBD ma caawin kartaa maskaxdaada?
Baarayaasha waxay aaminsan yihiin in awooda CBD ee ku shaqeynta nidaamka endocannabinoid iyo nidaamyada kale ee calaamadaha maskaxda ay bixin karaan faa iidooyin kuwa qaba xanuunada neerfaha. Xaqiiqdii, mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee la barto ee loogu talagalay CBD waa daaweynta xanuunada neerfaha sida suuxdinta iyo sclerosis badan.
Sideen kor ugu qaadi karaa heerarka serotonin?
Waa maxay saliida ugu fiican ee CBD ee lagu iibsado miisaan lumis?
Anandamide waa dhexdhexaadiye lipid ah oo u shaqeeya sida lafdhabarta endogenous ee soo dhaweynta CB1. Kuwani soo dhaweeyayaashani sidoo kale waa bartilmaameedka koowaad ee maadada ee masuulka ka ah saamaynta dawooyinka ee Δ9-tetrahydrocannabinol, maaddada cilmu-nafsiga ee Cannabis sativa.
Sideed u sameysaa anandamide?
Waxaa laga soosaaray N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine wadooyin badan. Waxaa hoos u dhigay ugu horreyn enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH) enzyme, kaas oo u beddelaya anandamide ethanolamine iyo arachidonic acid.
Jirka aadanaha ma soo saaraa CBD?
Waxa aanad ogaan karin, si kastaba ha noqotee, taasi waxay ka timid xaqiiqda ah in jidhka bini'aadamka uu dhab ahaantii soo saaro naftiisa cannabinoids u gaar ah: u dhiganta dabiiciga ah ee isku-darka laga helo geedka xashiishka, sida THC (tetrahydrocannabinol) iyo CBD (cannabidiol).
CBD runti ma weyn tahay?
Ma jiraan wax caddayn ah, tusaale ahaan, in CBD ay daaweyso kansarka. Waxaa jira cadeymo dhexdhexaad ah oo sheegaya in CBD ay hagaajin karto dhibaatooyinka hurdo la'aanta, xanuunka fibromyalgia, murqaha muruqyada ee la xiriira sclerosis badan, iyo walwal. "Faa'iidada ugu badan ee aan u arkay dhakhtar waa daaweynta hurdo la'aanta, walwalka, iyo xanuunka," ayuu yiri Dr. Levy.
Alaabada CBD ma nabad baa?
Isticmaalka CBD sidoo kale wuxuu leeyahay khataro qaar. In kasta oo inta badan si wanaagsan loo dulqaato, CBD waxay sababi kartaa waxyeelo, sida af qalalan, shuban, cunto xumo, lulmo iyo daal. CBD sidoo kale waxay la macaamili kartaa daawooyinka kale ee aad qaadato, sida khafiifiyeyaasha dhiigga.
Maxuu CBD ku sameeyaa maskaxda?
Astaamahani waxay kuxiran yihiin awooda CBD-da inay wax ka qabato soo-dhoweeyeyaasha maskaxda ee serotonin, neurotransmitter oo habeysa niyadda iyo dhaqanka bulshada. Soo Koobid Isticmaalka CBD ayaa la muujiyey inay yareyneyso welwelka iyo niyad-jabka labadaba daraasadaha aadanaha iyo xayawaanka.
Sidee dhakhso leh ayuu CBD uga baxayaa nidaamka?
CBD caadi ahaan waxay ku sii jirtaa nidaamkaaga 2 illaa 5 maalmood, laakiin qiyaastaas ma khuseyso qof walba. Dadka qaar, CBD waxay kusii nagaan karaan nidaamkooda usbuucyo.
Halkee laga helaa anandamide?
Anandamide waxaa lagu soosaaray enzymatically meelaha maskaxda ee muhiimka u ah xusuusta, hab fikirka iyo xakameynta dhaqdhaqaaqa. Cilmi baaris ayaa soo jeedisay in anandamide uu door ka ciyaaro sameynta iyo kala goynta isku xirnaanta muddada-gaaban ee u dhexeeya unugyada neerfaha, tanina waxay la xiriirtaa barashada iyo xusuusta.
Ma anandamide waa cannabinoid?
Sidoo kale loo yaqaan N-arachidonoylethanolamine (AEA), anandamide waxay la falgashaa duubayaasha CB ee jirka si la mid ah cannabinoids sida THC. Waa neurotransmitter iyo cannabinoid-receptor wakiil qabanaya oo u shaqeeya sidii farriin farriin loogu talagalay qabtayaasha CB ee jirka ku jira.
(1). Mallet PE, Beninger RJ (1996). "The endogenous Cannabinoid receptor agonist anandamide wuxuu wax u dhimaa xusuusta jiirka". Farmashiista Dabeecadda. 7 (3): 276–284
(2) .Mechoulam R, Fride E (1995). “Wadada aan la furin ee ku socota maskaxda xididdada cannabinoid, anandamides”. In Pertwee RG (ed.). Daawooyinka Cannabinoid. Boston: Saxaafadda Tacliinta. bogga 233–
(3) .Rapino, C .; Battista, N .; Bari, M .; Maccarrone, M. (2014). "Endocannabinoids oo ah biomarkers-ka taranka aadanaha". Cusboonaysiinta Taranka Aadanaha. 20 (4): 501-516.
(4).(2015). Cannabidiol (CBD) iyo analogyadeeda: dib u eegis ku saabsan saameynta ay ku leeyihiin caabuqa. Kimistariga & Kiimikada daawada, 23 (7), 1377-1385.
(5) .Corroon, J., & Phillips, JA (2018). Daraasad Qeyb ka ah Qeybaha Isticmaalayaasha Cannabidiol. Cannabis iyo cannabinoid cilmi baaris, 3 (1), 152-161.
(6).Xarunta Qaranka ee Macluumaadka Bayoolajiyada (2020). Soo-koobitaanka Xarunta 'PubChem Compound' ee loogu talagalay CID 644019, Cannabidiol. Dib loo soo ceshay Oktoobar 27, 2020, laga bilaabo .
(7) .R de Mello Schier, A., P de Oliveira Ribeiro, N., S Coutinho, D., Machado, S., Arias-Carrión, O., A Crippa, J.,… & C Silva, A (2014). Dhibaatooyinka ka hortagga antidepressant-iyo dhibaatooyinka sida cannabidiol: waa isku darka kiimikada ee Cannabis sativa. CNS & Cudurrada neerfaha-Bartilmaameedyada Daroogada (Bartilmaameedyadii Hore ee Daroogada-CNS & Cilladaha neerfaha), 13 (6), 953-960.
(8) .Binging, EM, Steenkamp, ​​MM, Manzanares, J., & Marmar, CR (2015). Cannabidiol oo ah Daaweyn Suurtagal ah oo loogu talagalay Cilladaha Walaaca. Neurotherapeutics: joornaalka Bulshada Mareykanka ee Tijaabinta NeuroTherapeutics, 12(4), 825-836.
(10).Safarka si loo sahamiyo eg.
(11).Oleoylethanolamide (oea) - usha sixirka ee noloshaada
(12).Waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan nicotinamide riboside chloride.
(13).Magnesium l-threonate supplements: faa'iidooyinka, qiyaasta, iyo waxyeelooyinka.
(14).Palmitoylethanolamide (digir): faa'iidooyinka, qiyaasta, isticmaalka, kaabista.
(15).6 faa iidooyinka caafimaad ee ugu wanaagsan ee supveverol supplements.
(16).5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada fosfatidylserine (ps).
(17).5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada pyrroloquinoline quinone (pqq).
(18).Kaabista nootropic ee ugu fiican alfa gpc.
(19).Kaabista da'da ee ugu wanaagsan ee nikotiinamide mononucleotide (nmn).
Anandamide-ka ku jira shukulaatada ayaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii nuugo, laakiin si dhakhso leh ayuu u kala jabay oo badanaa faa'iido ma leh.
Qiyaasta dhexdhexaadka ah ee anandamide waxay kicisay CB1 si loo yareeyo dabeecadaha argagaxa u eg. Laakiin qaadashada sare, anandamide sidoo kale waxay bilawday inay kiciso kanaalka ion ee TRPV1, kaas oo kahortagaya saamaynta anandamide ee anxiolytic.
Tan waxaa loogu yeeraa jawaabta "biphasic" ama "U-shaped".
Anandamide waxaa lagu soo saaraa jirkeena halka THC iyo CBD lagu soo saaro dhir.
Anandamide wuxuu ku shaqeeyaa hadal ahaan.
"farxad casaan ah"
Si fudud u rabto inaad dhahdo maqaalkaagu waa mid la yaab leh. Caddaynta qoraalkaaga ayaa si fudud u qabow iyo waxaan u maleynayaa inaad khabiir ku tahay mowduucan. Hagaag adiga iyo ogolaanshahaaga aan ku ogolaado inaan ku qabsado RSS quudintaada si aan ula socdo taariikhda boostada ee soo socota Mahadsanid hal milyan oo fadlan sii wad hawsha lagu farxo.
CBD waxay xakameysaa FHAA inay jabiso Anandamide taas oo ah waxa ka qayb qaata yareynta walwalka iyo sidoo kale yareynta caabuqa jirka.
Waxaan akhriyay dhawr waxyaalood oo sheegaya saamaynta raaxada Anandamide lafteeda, sidoo kale waxaan akhriyay in qof qaatay Theobroma Caocao soosaaray oo uu yeeshay saamayn farxad leh. Laga yaabee inaan fiiriyo taas markaa.
Waxaa jira laba soocaajiyeyaal cannabinoid oo kala duwan jirka: CB1 iyo CB2. THC waxay u shaqeysaa sida agonist ee CB1 taas oo keenta ka-hortagga dopamine.
THC iyo CBD labaduba waa phytocannabinoids, halka anandamide uu yahay mid kudhaca cannabinoid (waxaa soo saaray jirkeena)
Marka THC ay ku xirnaato CB1 waxay kicineysaa soo-saare G-Protein Coupled ah kaas oo markaa kicin doona enzyme iyo / ama farriin labaad. Natiijada GPCR-yadu waxay horseed u yihiin dhowr saameyn, sida lallabbo, lallabasho, iyo xanuun-joojiye.
Way ku caawin kartaa inaad ka fikirto sida aaladda Rube Goldberg - THC waxay ku xidhan tahay soo dhoweynta CB1, oo dhaqaajisa GPCR, oo dhaqaajisa dhowr farsamooyin kale.
Waxaan leenahay qabtayaasha Cannabinoid, CB1 iyo kuwa soo dhoweeya CB2 inay noqdaan kuwo sax ah. Daaweeyeyaasha CB1 marka la hawl galiyo, haddii ay si dabiici ah u dhacdo endocannabinoids ama synthetic ama si dabiici ah u dhacdo, waxay joojisaa farriimo badan oo kiimiko ah. Mid ka mid ah kuwan waa neurotransmitter-ka GABA, oo laftiisu xakameynaya sii deynta dopamine, oo ku siineysa qayb ka mid ah meelaha sare ee aad ka dareemayso haramaha. Waxaa jira boqolaal cannabinoids oo dhaqaajin kara labadan soo-dhoweeye, waxaana jira dhowr soo-dhaweeyeyaal cusub oo aan si fiican loo baran in badan oo cannabinoids ay sidoo kale leeyihiin isku xirnaansho.